Bubble Forest Paruzhinji Zvifananidzo - Dhizaini magazini
Paruzhinji Zvifananidzo Bubble Sango chidimbu cheveruzhinji chakagadzirwa neasidhi inodzivirira stainless simbi. Inovhenekerwa neakarongwa eRGB mwenje mwenje unoona unoita kuti chifananidzo chiwanikwe chinoshamisa metamorphosis kana zuva rovira. Izvo zvakasikwa semucherechedzo pane kugona kwezvinomera kugadzira oksijeni. Iro zita redondo rine 18 simbi masutu / zvigadzirwa zvinopera zvine korona muchimiro chekuita zvivakwa zvinomiririra imwechete mhepo bubble. Bubble Sango zvinoreva nzvimbo yepasi pano uye kune iyo inozivikanwa kubva pasi pemadziva, makungwa nemakungwa
Zita rechirongwa : Bubble Forest, Vagadziri zita : Mirek Struzik, Izita remutengi : Altarea.
Paruzhinji Zvifananidzo Mirek Struzik Bubble Forest